နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း - Real Gaming
နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း အလင်္ကာ ” ဖွားခါမတ်မတ် တည့်နက္ခတ် တည့်လတ်ပါကြကုန် သုံးခုဖြိုခွင်း ထိုအကြွင်း မှတ်ခြင်းသညာပြ တစ်ကို နတ်ဟူ နှစ်မှာလူ သုံးမူ ဘီးလူးရ “….
” လူသားလူခြင်း ထိမ်းမြားလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှ၊ လူနဲ့နတ်မှာ လွန်ချမ်းသာ ကြည်စွာအေးမြမြ၊ ဘီလူးနှင့်လူ ထိမ်းမြားမူ အတူမနေရ၊ ဘီလူးနှင့်နတ် ထိမ်းမြားလတ် ကောင်းမြတ်ရန်မျိူးပ၊ နတ်အချင်းချင်း ထိမ်းမြားသော် ရာကျော်သက်ရှည်ကြ၊ ဘီလူးအချင်းချင်း ထိမ်းမြားလျှင် သတင်းတေဇာကြွ “…
တွက်ချက်ပုံမှာ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို တည် ၃ဖြင့်စား၍ ၁ကြွင်းပါက နတ်နက္ခတ်၂ကြွင်းပါက လူနက္ခတ် ၃ကြွင်းပါက ဘီလူးနက္ခတ်ဖြစ်သည် မှက်ချက် ဝကြွင်း ၃ကြွင်းအတူပင် ဖြစ်၏။
ဥပမာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၀ခုနှစ်ဖွားသော ဇာတာရှင်အတွက် မွေးသက္ကရာဇ် ၁၃၆၀ကို တည်၍ ၃ဖြင့် စားပါက အကြွင်းမှာ ၁ဖြစ်၍ လူနတ်နက္ခတ်ဖွား ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ရပါမည်။
မွေးဖွားသော နက္ခတ်သဘောအရ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း ပြုမည်ဆိုပါက
၁။လူနက္ခတ်အချင်းချင်း ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါက တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လြန္စြာချစ်ခင် ကြင်နာကြ၍ ချမ်းသာသုခရပါလိမ့်မည်။
၂။ လူနက္ခတ်နှင့် နတ်နက္ခတ် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါက ကြွယ်ဝ ချမ်းသာသော စည်းစိမ်ကိုရ၍ အသက်ရှည်စွာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရလိမ့်မည်။
၃။ လူနက္ခတ်နှင့် ဘီလူးနက္ခတ်မွာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း မပြုသင့်ပေ။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါက ကွေကွင်းရခြင်း တစ်ယောက်တနယ်စီ နေထိုင်ရခြင်း ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း ပူပင်သောက များ၍ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရခြင်းများ ကြုံတွေရလိမ့်မည်။
၄။ ဘီလူးနက္ခတ်နှင့် နတ်နက္ခတ် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါက ရန်သူအမျိူးမျိုးကို အနိုင်ရရှိခြင်း ဂုဏ်သတင်းအရှိန်အဝါကျော်ဇော၍ ချမ်းသာစွာ နေရခြင်း နေနှင့်လ ရွှေနှင့်မြပမာ တင့်တယ်စွာ နေရပါလိမ့်မည်။
၅။ နတ်နက္ခတ်အချင်းချင်း ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပါက အနာရောဂါကင်းဝေး၍ ကျန်းမာစွာနေရခြင်း အသက်ရာကျော်ရှည်၍ အေးချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်ရခြင်းတို့ကို ရရှိခံစားရပါလိမ်မည်။
၆။ ဘီးလူးနက္ခတ်အချင်းချင်း ထိမ်းမြားလက်ထက်ပါက ရန်အပေါင်းတို့ကို အနိုင်ရရှိခြင်း ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောခြင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းတို့ကို ရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်။
နတ္နကၡတ္ လူနကၡတ္ ဘီလူးနကၡတ္တို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေ႐ြးနည္း
နတ္နကၡတ္ လူနကၡတ္ ဘီလူးနကၡတ္တို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေ႐ြးနည္း အလကၤာ ” ဖြားခါမတ္မတ္ တည့္နကၡတ္ တည့္လတ္ပါၾကကုန္ သုံးခုၿဖိဳခြင္း ထိုအႂကြင္း မွတ္ျခင္းသညာျပ တစ္ကို နတ္ဟူ ႏွစ္မွာလူ သုံးမူ ဘီးလူးရ “….
” လူသားလူျခင္း ထိမ္းျမားလွ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ်၊ လူနဲ႔နတ္မွာ လြန္ခ်မ္းသာ ၾကည္စြာေအးျမျမ၊ ဘီလူးႏွင့္လူ ထိမ္းျမားမူ အတူမေနရ၊ ဘီလူးႏွင့္နတ္ ထိမ္းျမားလတ္ ေကာင္းျမတ္ရန္မ်ိဴးပ၊ နတ္အခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားေသာ္ ရာေက်ာ္သက္ရွည္ၾက၊ ဘီလူးအခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားလွ်င္ သတင္းေတဇာႂကြ “…
တြက္ခ်က္ပုံမွာ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္ ၃ျဖင့္စား၍ ၁ႂကြင္းပါက နတ္နကၡတ္၂ႂကြင္းပါက လူနကၡတ္ ၃ႂကြင္းပါက ဘီလူးနကၡတ္ျဖစ္သည္ မွက္ခ်က္ ဝႂကြင္း ၃ႂကြင္းအတူပင္ ျဖစ္၏။
ဥပမာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၆၀ခုႏွစ္ဖြားေသာ ဇာတာရွင္အတြက္ ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၃၆၀ကို တည္၍ ၃ျဖင့္ စားပါက အႂကြင္းမွာ ၁ျဖစ္၍ လူနတ္နကၡတ္ဖြား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ရပါမည္။
ေမြးဖြားေသာ နကၡတ္သေဘာအရ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ျပဳမည္ဆိုပါက
၁။လူနကၡတ္အခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ၾလျႏၥာခ်စ္ခင္ ၾကင္နာၾက၍ ခ်မ္းသာသုခရပါလိမ့္မည္။
၂။ လူနကၡတ္ႏွင့္ နတ္နကၡတ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ပါက ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေသာ စည္းစိမ္ကိုရ၍ အသက္ရွည္စြာ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ရလိမ့္မည္။
၃။ လူနကၡတ္ႏွင့္ ဘီလူးနကၡတ္မြာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ပါက ေကြကြင္းရျခင္း တစ္ေယာက္တနယ္စီ ေနထိုင္ရျခင္း က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ပူပင္ေသာက မ်ား၍ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြရလိမ့္မည္။
၄။ ဘီလူးနကၡတ္ႏွင့္ နတ္နကၡတ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ပါက ရန္သူအမ်ိဴးမ်ိဳးကို အႏိုင္ရရွိျခင္း ဂုဏ္သတင္းအရွိန္အဝါေက်ာ္ေဇာ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း ေနႏွင့္လ ေ႐ႊႏွင့္ျမပမာ တင့္တယ္စြာ ေနရပါလိမ့္မည္။
၅။ နတ္နကၡတ္အခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ပါက အနာေရာဂါကင္းေဝး၍ က်န္းမာစြာေနရျခင္း အသက္ရာေက်ာ္ရွည္၍ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ရျခင္းတို႔ကို ရရွိခံစားရပါလိမ္မည္။
၆။ ဘီးလူးနကၡတ္အခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထက္ပါက ရန္အေပါင္းတို႔ကို အႏိုင္ရရွိျခင္း ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာျခင္း ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းတို႔ကို ရရွိခံစားရပါလိမ့္မည္။
ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး
ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဝယ်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ်နဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ် သိနိုင်ဖို့ရန်အတွက် စမ်းသပ်နိုင်မယ့် အလွယ်နည်းလမ်း ၄ မျိုးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်ဥကို နား အနားမှာကပ်ပြီး လှုပ်ကြည့်ပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ယူပြီး နားအနားမှာ အသာ ဖြေးဖြေးလှုပ်ကြည့်ပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက်ဥမှန်ရင် ဘာအသံမှ မထွက်ပါဘူး။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ကြက်ဥထဲကနေ အသံထွက်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အဲဒီကြက်ဥဟာ လတ်ဆတ်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ၂။ ရေထဲသို့ထည့်ကြည့်ပါ။ ခွက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဇလုံတစ်လုံးထဲကို ကြက်ဥ မြုပ်ပြီး ၁ လက်မခန့်လောက် ရေအေးထည့်ထားပါ။ …
တစ်လအတွင်းမှာ တင်ပါးလေးကို လုံးဝန်းကျစ်လစ်သွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး
ပျိုမေတို့ တင်ပါးလေးတွေ လှဖို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပဲ လုပ်လို့ရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်။ ထိုင်ထလုပ်ရတာ မကြိုက်တဲ့သူလေးတွေအတွက် တင်ပါးလေးတွေ လုံးဝန်းကျစ်လစ်လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလွယ်လွယ်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် လေ့ကျင့်ခန််း -၁ ပုံထဲကလို လက်ဝါး၊ ဒူးနဲ့ ခြေဖမိုးတွေ ကြမ်းပြင်မှာ ထိထားတဲ့ပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်ကို ဆန့်တန်းလိုက်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်းနေပါ။အဲ့ဒါကို ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို (၁၀)ခေါက်စီ လုပ်ပေးရုံနဲ့ တင်ပါးဘေးဘက်မှာ ချိုင့်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အသားပြည့်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လေ့ကျင့်ခန်း -၂ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ခြေဖျားနှစ်ဖက်ကို ထောက်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်က လေးကိုင်းပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အနောက်ဘက် မြှှောက်နိုင်သလောက်မြှောက်ပေးပြီးနဂိုပုံစံအတိုင်းပြန်နေပေးပါဘယ်ညာ တလှည့်စီ (၁၀) ခေါက်စီ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် တင်သားလေးတွေ အနောက်ဘက််ကို လုံးဝန်းလာပါလိမ့်မယ် …
ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများ
ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ ငွေကုန်ပေါက်တွေ များလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေး လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံရသလို လာဘ်ပိတ်တာတွေ ငွေကြေးအလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကောင်းသောစွမ်းအင်ဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် အဆက်မပြတ် ငွေဝင်နေမှာ ဖြစ်သလို ငွေကုန်ပေါက်တွေလည်း လျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဈေးဆိုင်ရဲ့ ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လာဘ်လာဘတွေ ပွင့်စေပြီးရောင်းသူတယောက် ဝယ်သူတထောင် ဖြစ်စေတဲ့အထိ အကျိုးပေးစွမ်းပါတယ်။သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်)ငွေသေတ္တာထဲမှာ .ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ ဟောင်းများ၊receipt ဟောင်းများ ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီးသူူများပုံ၊ ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သော ပုံများ။ (မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်များ ဖြစ်စေပါတယ်။) တိုလီ မိုလီ မှတ်စု များ၊ လိပ်စာ …